Kungakhathaliseki ukuthi bayahamba ithatha uhambo olude, noma umane wanquma ukuvakashela edolobheni engingalazi, uyoba cishe ukusebenzisa GPS-Itilosi. Kulokhu, into ebaluleke kakhulu - ukuze wenze izinqumo ezinhle, ngoba idivayisi engaphelele amabalazwe yisikhathi noma esibonakalayo ukuphathwa Ukhulelwe kuhambisana eziningi izinkinga. I choice omuhle kungaba igajethi ngokuthi LEXAND SA5 HD.
Navigator LEXAND SA5 ilethwa ebhokisini kunalokho enkulu, okuyinto igcina idivayisi ngokwayo futhi zonke izesekeli ezidingekayo. Lezi zihlanganisa:
Ugwayi adaptha ukuxegiselwa.
Zonke izingxenye kuhle ngokuqinile behlangene, zokwakha zeqophelo eliphezulu, ikhava ye "soft-touch". Mshini yasibamba akuhlukile, ngempela omkhulu futhi ungakhululekile, unamathele nge ukuncela izinkomishi kuya somoya.
LEXAND SA5 HD mikhulu ne-stout, kodwa kancane kuka kwezinye iziphequluli nge isibonisi efanayo idayagonali, ukala 175 amagremu. The main impahla somzimba plastic, ngesimo kahle eyizingqabavu futhi hhayi singcoliswe kalula kakhulu. nokubukeka kuyinto ehloniphekile, hhayi eqolo, kodwa hhayi lifana a mbumbulu ezishibhile.
On the chassis khona umgodi we-earphone, ugqoko ehlukile imemori khadi, i yokufaka uxhumano ezingemuva umbono ikhamera.
Amajaji ezingemuva ibekwe ikhamera elikuvumela ukusebenzisa Navigator njengoba DVR, ngenxa yesizathu esifanayo kwaba yindawo i ozikhethela imemori khadi.
Isikrini akuyona umxhwele kakhulu, a diagonal 5 amasentimitha isetshenziswa ababuthakathaka-matrix LCD isinqumo 800 x 480 pixels. Buka ama-movie nokufunda izincwadi kulesi sikrini akusilo ukhululekile kakhulu, ikakhulukazi uma siqhathanisa nabanye, akazange agxile idivayisi navigation. Noma kunjalo, lesi akusona Tablet PC, kodwa isiphequluli, ngakho akufanele yini ukuthethelela esezingeni isithombe. Kunalokho, idivayisi inama-engeli ezinhle wokubuka, ukuthi into ebaluleke kakhulu endleleni.
128 wamamegabhayithi we-RAM 4GB main
Lithium polymer battery 1100 mah
SiRF Atalas-V, 64 isiteshi
Izici ugqamise khona FM-umamukeli bese umdlali audio elikuvumela ukusebenzisa idivayisi yakho njengoba umsakazo.
Esakhelwe navigation chip ngaphandle kwezinkinga ubhekana umsebenzi wayo oyinhloko, imvamisa iwashi 0.8 GHz kuyivumela ngokuphazima kweso, ngaphandle amabhuleki nokuphahlazeka uthole izinkomba. I Onjiniyela uthembisile ukusebenza kwafinyelelwa-25% uma kuqhathaniswa onobuhle ezandulele chungechunge.
inkumbulo Main zingandiswa usebenzisa khadi, uma kunesidingo. gigabytes engeziwe ingasetshenziswa ukuze ulayishe okuqukethwe kwabezindaba (amabhayisikobho, umculo).
GPS-module iwusizo kakhulu ke ukusebenzisa kuthatha ngaphansi komzuzu ngemuva kokushintsha kudivayisi.
Ngenxa nohlaka lwenqubomgomo yokuhlinzekwa LEXAND SA5 HD wenza uhlelo lokusebenza lwe-Windows CE 6.0. Kumi esiqongweni sezindawo OS efakwe igobolondo lokuzula amasevisi. Lokhu Itilosi isebenzisa isicelo "Navitel", ugcwalise ikhadi zibandakanya inombolo yamazwe, kuhlanganise naseRussia, Ukraine, eBelarus, Kazakhstan, Finland, Sweden kanye nabanye. Amamephu kungenziwa olusha mahhala.
Umenzi uthi lena itilosi wokuqala Russian-Windows CE, elikwaziyo ukuxhuma inetha ngosizo 3G-imodemu, futhi ngokuxhuma ifoni ye-Bluetooth. It ikuvumela ukwakha emizileni umgwaqo esekelwe zasemgwaqweni isiminyaminya, kanjalo ukonga isikhathi, kuvuleke indlela ngokusebenzisa amasayithi khulula, kanye ukusekela inguqulo yamanje ikhadi.
Ngaphezu ukusebenza kule divayisi nazo enikeziwe kanye nezinye amathuba. I amaminerali ungakwazi ukuhlukanisa ikhono lokusebenzisa ikhamera esakhelwe njengoba rekhoda ividiyo. Abanye izici ezifana ukubuka amavidiyo, ufunda izincwadi noma ukulalela umculo, eziningi ezinhle ngeke nilingenise, kodwa ake kukhanye amahora isiminyaminya kanye yokupaka. Kungenzeka futhi ukufaka umdlalo elula, kodwa ngaphambi kwalokho okudingayo ukuthola imemori khadi ikhadi main kuzoya ngaphansi nesofthiwe esishunyekiwe.
DVR lokhu igajethi akufanele ukwenza. Egibele ikhamera 1 megaphikseli neze ukuhambisana lo msebenzi, futhi ukhiqiza isithombe eliphansi kakhulu, isithombe kungabukeki, kanzima ukwenza yonke into, futhi i-engeli wokubuka neze, kodwa nokho, uma kudingekile, ukuze kuvele kahle Ukugunda. Ukutholakala kwalesi sici kungenziwa kubhekwe njengento plus.
LEXAND SA5: Izibuyekezo
Kunokuba ukufunda izimemezelo kanye emaphepheni, ewusizo kakhulu ukuze ufunde mayelana navigation amakhono isandla kuqala, okungukuthi ngabasebenzisi asebethole sathola ithuba ukuhlola kudivayisi ngokugcwele.
Inzuzo enkulu lapho lwabelwe bonke abasebenzisi ngaphandle kokukhetha - kungcono ukuba nobuhlobo obuhle. Ngokusho kwabo, itilosi LEXAND SA5 GPS ngokuqiniseka kakhulu ophethe isiginali kusuka satellite ayibuyi off phakathi, njengoba kuye kwenzeke uma ngezinhlamvu ezincane izinga onobuhle.
Abaningi bathandile amanani aphansi kanye nekhono ukulanda ibalazwe okuphelele "Navitel" (abasebenzisi zabo ziqonde ikakhulukazi). Abantu adunyiswe esibonakalayo isiphequluli multimedia yayo izici.
Yiqiniso, kwakukhona okuningi ukugxekwa ikheli zedivayisi. Ngaphansi ukusatshalaliswa wawa umnikazi ukuthi abaningi babefa ababuthakathaka futhi ungakhululekile, umuntu sinqatshiwe ukubonisa, ethi akathathi akasilaleli futhi kakhulu kukhanya (Nokho lifakwe bese enamathela anti-lembhali).
Kusukela nemibi ethize kungenziwa yokuntuleka nezikhala SIM khadi ezikhonjwe (ngokusobala, hhayi wonke umuntu ufuna ukusebenzisa imodemu, noma xhuma nge Bluetooth).
LEXAND SA5 - iyunithi isilinganiso emhlabeni iziphequluli, esesikhundleni kochwepheshe efanayo kanye nebubi njengoba iningi nezinye amamodeli we ekilasini yayo intengo. Umenzi esebeké iyahola iyona navigation ingxenye igajethi, kancane imihlatshelo imisebenzi multimedia, kanjalo ngcono ikhwalithi reception nokuxhumana amakhadi. Kulesi isiqondiso idivayisi KULUNGILE, futhi ebuthaka imishini yezobuchwepheshe - yayiyisiqalekiso zonke ephathekayo navigation systems.